I-China Runjin © Krunt ™ -Z12 Z12 Ice Cream Rotary Egcwalisa Umshini Wokwakha Nokwakha | Runchen
Umshini wokugcwalisa umshini weRunjin © Krunt ™ -Z12 Z12 Ice Cream Rotary
Isetshenziselwa ukugcwalisa u-ayisikhilimu, usoso, noma iqhwa lamanzi ngezinhlobo ezahlukahlukene zezinkomishi, izigaxa. Umshini ojwayelekile ubungakhiqiza uhlobo olulodwa kuphela lomkhiqizo we-ayisikhilimu, kepha uma ungeza isiteshi semishini ehlukile, izigaxa ezihlukahlukene zomumo nezinkomishi u-ayisikhilimu nakho kungakhishwa.
I-Runchen Krunt-Z 12 isisombululo esinezindleko eziphansi esifanela ifektri esikali esincane .Ingahlangabezana namakhasimende angenayo imfuneko yamandla aphezulu .Kodwa ingaveza izinhlobo ezahlukene ze-ayisikhilimu enekhwalithi ephezulu esezingeni .Ingasetshenziswa futhi ukuhlolwa kwelabhoratri noma ukuthuthukiswa kwe-ayisikhilimu.
Izinkomishi zesitaki engxenyeni yokuhambisa inkomishi, futhi lezi bezizokwehliswa ukufaka ubhavu ngakunye ukulinda ukugcwaliswa .Kunezinhlobo ezahlukahlukene zokugcwalisa ezisuselwa ezintweni ezihlukile eziluhlaza njenge-ayisikhilimu, usoso, noma iqhwa lamanzi. Uhlobo lokugcwalisa lungaba njengokugcwalisa okuningana, ukugcwaliswa okufika ngezikhathi ezithile, bese ucindezela ukugcwalisa ukusika (kuzonamathiselwa ithuluzi elilodwa lokusika).I-Runchen Krunt-Z12 nayo ingahle ilungiselelwe ngezingxenye zokuhlobisa ezahlukahlukene ukuhlobisa ubuso be-ayisikhilimu. Ngokuhambisana nemikhiqizo ehlukile yokwakheka, ingakhetha ukuvalwa okuhlukile kokufaka umsebenzi.Futhi ingaqinisa imikhiqizo ngokusika kusengaphambili ifilimu.Ngemuva kokufakwa noma ukuvalwa kwamabhodlela, ingxenye yokukhipha izokhipha imikhiqizo futhi idlulise kusuka kumshini wokugcwalisa ukuze iqandiswe ngokushesha, ize igcwale.
UKrunt ojwayelekileTMUzimele we -Z12 wenziwe ngensimbi engagqwali .Umklamo womshini wokugcwalisa ungahlangabezana neZinga eliPhakeme lezenhlanzeko. Uhlaka lwayo oluvulekile luvikela ukonga amanzi kahle futhi luhlanzwe kahle.Zonke izinto ezidizayinwayo zifaka umlomo wombhobho, ugoqo wepayipi nezingxenye zedrayivu zihambisana nemfuneko yokuxhumeka okulula, ukushintshwa nokuhlanzwa.
Uhlelo olukhulu lweDrayivu
Imvamisa yemoto ishayela abahlukanisi be-swing kanye ne-rotation, futhi ilawula ukujikeleza okungaphakathi kwesikhulumi se-module nesiteshi sokuya phezulu naphansi. Ukuthumela isignali yesikhathi esithile ku-PLC ngekhodi yohlelo lokujikeleza ukulawula isilinda ngokunembile, nokwenza zonke izingxenye zisebenze kahle.
UKruntTM-Z12 umshini wokugcwalisa ojikelezayo ulawulwa yi-PLC yesikhungo. Ngamagama e-PLC, ukukhiqizwa kwe-ayisikhilimu kungabhekwa ngokucacile, futhi ukufaka esikhundleni kulula kakhulu .Kunendawo yokonga engu-2MB, futhi ingaqala noma ime ngokuzenzakalela. Amashumi wemikhiqizo angahlelwa kusengaphambili.
Idatha yemikhiqizo izokhonjiswa esikrinini se-PLC .futhi iphaneli yokulawula yonke ifakwe izinkinobho zokuthinta nokubonisa kwedijithali, okunikeza ukusebenza okulula nokuqapha.
Uhlelo lwe-Air Compressor ne-Vacuum System
Ngokuya ngemfuneko yenhlanzeko yokudla, zonke izingxenye ze-air compressor zenziwe ngezinto ezingenakho ukugqwala, ukuthambisa .Amavalves wonke amukela imodi kagesi futhi afakwe ngaphakathi kohlaka. Yonke isilinda ejwayelekile ivela kwaFesto. Izingxenye ze-vacuum System ezingamakhompiyutha we-Lids dispenser kanye ne-lids engeza zilungiselelwe ngama-valve ochwepheshe.
UKruntTM-Z12rotary umshini wokugcwalisa usebenzisa ukwakheka kokuklama okuthuthukile nezingxenye zomsebenzi ezinamandla ukuhlangabezana nezidingo zentuthuko yomkhakha we-ayisikhilimu. Inzuzo enkulu kunayo yokuthi inomsebenzi omningi kunohlobo lwendabuko.
Uhlaka oluzinzile ngokwengeziwe:
Yamukela ukuqiniswa kohlaka lokwenza umsebenzi womshini uzinze kunokwesiko.
Okuningi uhlelo lokushayela oluzinzile :
Kusetshenziswa abahlukanisi be-Modular jika nabajikelezayo ukwenza injini enkulu isebenze ngokuzinza, kube lula ukuhlola nokugcinwa. Iziteshi eziningi zisebenzisa ngokuphelele isakhiwo semishini ukwenza umshini ugijime umsindo ozinzile nophansi.
Uhlelo lokushisa lukashokholethi olujwayelekile:
Ubuchwepheshe bokushisa obushintshashintshayo busetshenziswa kumbhobho wokugcwalisa ukugwema isenzeko esivimbayo esibangelwa ukuqiniswa kukashokoledi lapho izinga lokushisa elincane liphansi.
sinikeza izinhlobo ezahlukahlukene zezingxenye. Kulokhu, isilinganiso somkhiqizo singanwetshwa kakhulu. Ngezansi kwetafula eliyinkomba:
Ukuqondanisa izingxenye ezisele
Ukuqinisekisa ukusebenza komshini, umshini wokugcwalisa we-Runchen Krunt-Z12 kufanele kube ngcono ukukhetha izingxenye zokuphumula zangempela. Uma ukhetha ezinye, lezi zizoba nezinto ezingazinzile, ziholele ekuphulweni kwemishini. Sicela uthintane ngaphambi kokusebenzisa.
Imigqa 1 umugqa Imigqa emi-2
umthamo ngehora we-Standard 2400 4800
isivinini sokugijima （stoke / min） 10 ～ 45 10 ～ 45
umthamo wokugcina ushokoledi 25L
ukumboza umkhiqizo 2-6ml
ukukhweza umkhiqizo 4-8ml
igesi mass (ngaphandle kukawoyela, amanzi) .02.0g / m3
ukusetshenziswa komoya 1 m3/ iminithi
ingcindezi ukusebenza (iminithi) I-6bar (87LB / intshi eyisikwele)
Langaphambilini Umshini weRunjin © Krunt ™ -4000 Wokuxuba Izithelo
Olandelayo: Umshini wokugcwalisa umshini weRunjin © Krunt ™ -G4
Umshini wokugcwalisa umshini weRunjin © Krunt ™ -G4